Munamato weSanta Muerte wekutonga murume [+]?
Munamato weRufu Rutsvene kutonga murume Inoonekwa nevanhu vazhinji semunamato unechekuita zvishoma neChechi yeKaturike kana yechikristu nekuti iko kutenda uko kunobva kune vagari veko vekuMexico.
Nekudaro, uye kunyangwe ichiratidzika semufananidzo wedhimoni, chokwadi ndechekuti uyu mutsvene akabatsira vanhu vazhinji uye ane simba rakakosha muzviitiko zvine manzwiro.
1 Munamato waSanta Muerte wekutonga murume Ndiani Santa Muerte?
2 Munamato weRufu Rutsvene kutonga murume
2.1 Chii chiri munyengetero uyu?
2.2 Ndirini pandinogona kunamata munamato kuna Santa Muerte kuti nditonge?
Munamato waSanta Muerte wekutonga murume Ndiani Santa Muerte?
Santa Muerte anoratidzwa semukurumbira wekutenda uyo unonamatwa mumaguta mazhinji eLatin America, kazhinji muMexico uko kunopembererwa sechechi yechitendero.
Mirira nechimiro chechipfupa chinogona kupfekedzwa chero ruvara asi icho chinomiririra zvakanyanya yakasviba.
Vateveri vake vanowanzonzwa vachirambwa sezvavanonatsa musande uyo muchechi yeKaturike yavasina kucherechedza zvakadaro asi kuti moyo uye kutenda kwevakawanda iSande sevamwe.
Ivo vanoti kwete kurudzira kutya asi ruremekedzo uye kuvimba uye ndizvo chaizvo izvo zvekupedzisira zvinoita kuti avo vanowedzera kujoinirana vatendi.
Kupisa uchi, kupisa shungu. Ndinokunzwira tsitsi ..
Uye iwe unonzwira kwandiri Mifungo yako nemanzwiro ako ...
Ini ndinotonga pfungwa dzako dzese uye zviito zvako zvinoiswa Nehunyanzvi hweRufu rwakaropafadzwa.
Ini ndinodaidza iwe ____________________ ndinokuda iwe __________________ Uya uuye kuzonditsvaga ________ show Ndiratidze rudo rwako rwese.
_____________ Uyai patsoka dzangu. Zadzisai zvose zvandinokumbira kwamuri. Mukadzi wehusiku, Akanyanya Mukadzi wechisiko, uye simba rake repanyika ...
Kufuridzira uye kudzora pfungwa, zviito Uye moyo we __________________ Dominant lady, iwe Rufu rwangu rwakaropafadzwa Ndiunzire _______________ toned pamberi pangu.
Matanho ake ngaauye kwandiri, Dai moyo wake uchiburitsa rudo kwandiri, Dai muviri wake uchingoda ini Kuti shungu dzake dzive shungu Dzandinomupa.
Wangu Akarumbidzwa, Usape miniti yemafaro Kana kusimbisirwa ku _____________ Kana usipo neni Usatendera chero mukadzi kuti asvike kwauri Uye kana vachisvika kwauri, Kuti iwe uchavatamisa chaizvo kubva kuupenyu hwako neutsinye hwakazara.
Kana zvisiri zvangu, ipapo zvichave pasina munhu, Rufu rwakaropafadzwa, Mhare inesimba, ndinokubvunza iwe nekuzvipira kwangu kose. Myrtle sap inotenderera ichipisa kuburikidza neropa rake ini ndinodaidza iwe _________________ huya kwandiri. Mwoyo wako, pfungwa dzako uye muviri wako Kubva panguva ino zvavari uye zvichave zvangu, nekusingaperi.
Muzita reRufu Rwakaropafadzwa ini ndinokubvunza. Dominant lady ndiunzire _________________ Kudonha nerudo kwandiri.
Uye ndakazvipira kumiti yanguKutevedzera uye kundiratidza rudo rwese Unofungei nezvangu. Santísima Muerte, iwe unofambisa simba rakanyanya uye rakaoma kwazvo muchadenga, bend ________________ Ndinokukumbira kuti uuye naro kwandiri sezvazviri uye kubva kwazviri. Kunyangwe iri imwe yenzvimbo dzine rima nguva dzose Gara wakaisa _______________ pamberi pangu uye rega nzira yake iyambuke padhuze neyangu.
Santísima Muerte iwe unogona kuva chiuru Iwe unogona kuva miriyoni, ndiunzire ku _____________ Uye murudo neni ndinokumbira kuti bhiza rako riunze pamberi pangu Kuti pfumo rako urikande kwandiri Mai vane simba ita shuwa kuti kunyangwe dai risiri iro rinondinhuwidza , izvo zvinondiyeuchidza, kuti ndinonzwa ndiripo ...
Chero ani waanenge aine uye munzvimbo yaari Mukadzi wehusiku, Mukadzi wezuva, ndinokumbira kuti mweya we _________________ uve neni nguva dzese ...
Kuti anondida chete, kuti iye chete ane maziso kune Rufu Rwangu rwakasungwa anosunga
Kune moyo wangu uye kumuviri wangu Muviri pfungwa nemweya we _______________ huya kwandiri Husiku uye masikati uchave uneni Ndapota, ndinokukumbira muzita reRufu Rutsvene Rufu Rutsvene ndipe simba, mwoyo…
Uye iyo yakazara dunhu re __________________ Santísima Muerte ndinokukumbira kuti uve mudziviriri wangu Uye iwe uzadzise zvese zvakanaka zvandinokumbira kwauri ndinokudaidza kuti Santísima Muerte Usandisiya ...
Rufu Rwakarongeka Usandiregeredza Rufu rwakaropafadzwa ndiunzire kwandiri ku ____
Ichi Santa Muerte mapapiro ekutonga murume akaoma yakakura asi yakasimba.
Haisi munamato weudyire, munamato uchikumbira simba rekuva munhu kuti uone zvichachinja pfungwa dzake.
Izvo hazvisi zvekunyadzisa kana kuita vamwe kuti vaite kuda kwedu, kuri kuvabatsira kuti vaone sarudzo idzo, sekureva kwedu, dzakanakisa.
Izvi uye minamato yose Ivo vane simba chaizvo, unogona kuzviita pese paunenge uri mumamiriro akaoma mausingazive zvekare zvekuita.
Panyaya yemunyengetero uyu chaiwo, zvinotsvaga kugona kutonga mumwe munhu kuburikidza nemunamato uye izvi zvinogoneka kana uine kutenda.
Ndirini pandinogona kunamata munamato kuna Santa Muerte kuti nditonge?
Iyo nguva yaunoda iyo.
Vanhu vazhinji vanokurudzira kuti zvakanaka kuve uri wega uye kugadzirira nharaunda kuti simba rakaipa risakanganise kutungamira kwemunamato asi izvi hazvisi zvekumanikidzwa.
Iyo yakabatana iyo inokumbirwa sechinhu chisingarondedzereki kuve neruzivo rwekutenda nekuti hatigone kumutsa munyengetero kana tikasatenda kuti izvo zvatinokumbira zvinogona kuwanikwa nenzira inoshamisa.
Tsvaga mufaro murudo nemunamato Unochengetedza Rufu kuti utonge murume.
Holy kufa munamato pabasa